Tu Tu Tha: ဝတ္ထုတို ၆
မနှစ်က ဒီလိုအချိန် ၃၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို ကျင်းပနေတုန်းက ၃၇ နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ တခြားတနေရာကို ရောက်နေလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝထင်မထားခဲ့ဘူး။ ကျမရဲ့မွေးနေ့ကို ဝင်တဲ့ခုအချိန်မှာ တယောက်ထဲ ကြက်ဥတလုံး ကိုကြော်ပြီး ခပ်ခြောက်ခြောက် ထမင်းတပွဲနဲ့ ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်နေရလိမ့်မယ်လို့လည်း မထင်ထားခဲ့ဘူး။ ခါတိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ ၂၆ ရက်နေ့မှာ မွေးနေ့ကျတဲ့ ကျမထက် ၄ နှစ်ကြီးတဲ့ အစ်ကိုရယ် ၂၉ ရက်နေ့မှာ မွေးနေ့ကျတဲ့ ကျမရဲ့ အစ်ကိုလို ချစ်ခင်ရတဲ့ (အစ်ကိုပဲထားပါတော့) သူငယ်ချင်းရယ် သုံးယောက်ပေါင်းပြီး ငယ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ မွေးနေ့ကျင်းပနေကျ။ ၁၀ တန်းလောက်ကတည်းက အဲလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာဟာ ခုချိန်ထိလည်း တယောက်ယောက် ခရီးလွန်မနေရင် နှစ်တိုင်း ကျင်းပနေကျပါ။ ဒီနှစ်မှာတော့ ကျမက ခွဲထွက်လာခဲ့သူ။ ထိုင်းနိုင်ငံက ချင်းမိုင် ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ကလေးမှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် မွေးနေ့ကို ကြိုနေရတာဟာ စဉ်းစားကြည့်တော့ နည်းနည်း ထူးဆန်းနေသလိုပဲ…။ လူတွေဟာ ထင်မထားတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတဲ့စကားက အလကားမဟုတ်ဘူးနော်။ ကျမသိတတ်စအချိန်ကတည်းက ကျမရဲ့ မွေးနေ့ တွေမှာ အမေနဲ့ အမြဲ အတူရှိနေခဲ့တာ။ ခု ၃၇ နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့ကတော့ ပထမဆုံး အမေ့ရဲ့ အဝေးမှာ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်နေပြန်တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ညဦးက ကြည့်ခဲ့တဲ့ စတိတ်ရှိုးမှာ အဆိုတော် စံပီး က ထူးအိမ်သင်ရဲ့ “အမေ့အိမ်” သီချင်းကို ဆိုလိုက်သေးရဲ့။ အဲဒီသီချင်းကို ကြိုက်ပေမယ့် ကျမ လုံးဝ လိုက်မညည်းခဲ့ဘူး။ ကျမကတော့ အမေ့ရဲ့ ဒုက္ခအိုး စစ်စစ်ပါ။ ကျမကြောင့် အမေက အမြဲ ဂုဏ်ယူ ပျော်ရွှင်ချင်ပေမယ့် အမေ့ကို စိတ်ညစ်အောင် စိတ်ရှုပ်အောင် လုပ်တဲ့ သမီးတယောက်လေ။ ကျမရဲ့ မွေးနေ့တွေမှာ (အိမ်ထောင်ကျပြီး အိမ်ခွဲနေတဲ့အထိ) မနက်အစောကြီး ကျမ မနိုးခင် အိမ်ဝရောက်လာ Happy Birthday အနမ်းနဲ့ လာနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ အမေ့ကို ကျမ မလွမ်းနိုင် လောက်အောင် အသည်းမမာတာတော့ သေချာပါတယ်။ အမေကကော သူ့ရဲ့ တဦးတည်းသော သမီးဆိုးကို လွမ်းနေမလား..။ ဒါမှမဟုတ် ကျမလိမ္မာဖို့ ဘုရားမှာ ဆုတောင်းနေတာ (တသက်လုံးလည်း တောင်းခဲ့ပြီးသား ဒါပေမယ့် ခုထိလည်းတောင်းတုန်း) လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျမကလည်း ဘုရားသခင်ကိုမှ အားမနာ ခုထိဆိုးတုန်း၊ အမေစိတ်ညစ်အောင် လုပ်တုန်း…. တော်တော်ကို မကောင်းတဲ့ သမီးပေါ့။ ကျမရဲ့မွေးနေ့မှာ ကျမကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ အမေ့ကို ဝတ္ထုတို တပုဒ်ကလွဲလို့ ဘာမှ ပြန်မပေးနိုင်ပေမယ့် ဒီလို သူ့အကြောင်း တခုတ်တရ ရေးတဲ့ သမီးအတွက် အမေက ကြံဖန်ဂုဏ်ယူနေမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေက ကျမရဲ့အမေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ မွေးနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ အမေ့အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတပုဒ်ကို ပို့စ် တင်ချင်ပါတယ်။ ဖင်မလီမဂ္ဂဇင်းမှာ ၂၀၀၄ လောက်က ပါခဲ့ဖူးတဲ့ “မနက်ဖြန်များရဲ့ အတိတ်” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးပါ…..။ ။
“သမီးရယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း မှန်ထဲကြည့်ပါဦး..။ ဖိုသီဖတ်သီနဲ့ လှလှပပ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လေးများ နေပါဦးလား”
ကျမနဲ့ အမေနဲ့တွေ့တိုင်း အမေရွတ်နေကျ စကားများ…။ ကျမကလည်း ကျမပဲလေ…၊ တွေ့တဲ့အင်္ကျီနဲ့ လုံချည်ကို ကောက်စွပ်ပြီး ဖြစ်သလိုထွက်လာတာ များသည်။ တကယ်တော့ အိမ်ထောင်ကျမှ ဒီလို ဖြစ်လာခြင်း မဟုတ်ပါ..။ ကျမ အပျိုဘဝကတည်းက ဖြစ်သလိုဝတ်၊ ဖြစ်သလို နေတတ်တာ အမေသိပြီး ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် အခု အိမ်ထောင်သည် ဘဝ ရောက်ခါမှ အမေ ဘာကြောင့် ပြောရသလဲ…။ ရှင်းပါသည်…။ အမေ ကျမကို မကျေနပ်..။ ကျမတတ်ထားသည့် ပညာများနှင့် ကျမလုပ်နေသည့် အလုပ် ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်ဘူးထင်သည် (တကယ်လည်း မအပ်စပ်ပါ)။ ကျမယူထားသည့် ယောက်ျားနှင့် ကျမကိုလည်း မတန်ဘူးထင်သည်။ ကျမနှင့် ဆုံတိုင်း ကျမသူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ဘယ်သူက ဘယ်မှာ၊ ဘယ်သူကဖြင့် ဘယ်လို ကြီးပွားနေသည် စသဖြင့် ပြောပြီး…
“သမီး ခုထိ ဘာမှလည်း မဖြစ်သေးဘူး” ဆိုသောစကားနှင့် အဆုံးသတ်သည်။ အမေမို့ ကျမသူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်း သိလည်း သိနိုင်လွန်းသည်။
ကျမကတော့ ပြုံးသည်..။ အမေက ကျမကို သိပ်မျှော်လင့်တာလည်း ကျမသိပါသည်။ ခု ကျမမှာ သားလေး တယောက်ရလာတော့ ပိုသိလာသည်။ ကျမသားလေးကဖြင့် ခုမှ တနှစ်ကျော်ကာရှိသေး….ကျမက ဖြစ်စေချင်တာတွေ..။ လုပ်ပေးချင်တာတွေ၊ မျှော်လင့်တာတွေ မနည်းမနော။ ဒီတော့ အမေ ကျမကို မျှော်လင့်တာ မဆန်းပါ။
အစ်ကိုနှင့် မောင်ကြားမှာ တဦးတည်းသော သမီးလေးဖြစ်၍ ပိုမျှော်လင့်သည်။ အမေက ကျမကို ကုမ္ပဏီ တခုခု မှာ ဝင်လုပ်၊ လှလှပပ ဝတ်စားပြီး ပုံမှန် ရုံးသွား ရုံးပြန်လုပ်စေချင်သည်။ သူ့တုန်းကလည်း အစိုးရ ရုံးတခုမှာ လခစားဘဝနှင့် ကြာမြင့်စွာ လုပ်ခဲ့ဖူးသည်။ အမေက လှလှပပလည်း ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်သည်။ ကျမ ကလေး ဘဝက အမေနှင့်အတူ ရုံးသို့ မကြာခဏ လိုက်သွားဖူးသည်။ ကျမသိသလောက် မြင်သလောက်တော့ အမေတို့ စာရေးမတွေ စကားပြောလိုက်၊ လက်ဘက်လေး သုပ်စားလိုက်.. ပြန်ခါနီးတော့ တို့ဖတ်ကလေး တို့ပြီး အိမ်ပြန်လာ။ ဒါပဲလေ.. အဲဒီကတည်းက ကျမ ရုံးအလုပ်ကို စိတ်ကုန်ခဲ့သည် (အားလုံး ဒီလိုပဲလို့တော့ မဆိုလိုပါ)။
အမေက လှလှပပလေး ဝတ်စားပြီး ရုံးသွား ရုံးပြန် လုပ်စေချင်တာပဲ သိသည်။ အဲဒီလို လှလှပပလေး ဝတ်စားဖို့ ရတဲ့ လခနဲ့ လောက်ရဲ့လား ဆိုတာတော့ တခါမှမစဉ်းစားခဲ့။ မိတ်ကပ်ဖိုး ရှိသေးသည်။ လမ်းစရိတ်ရှိသေးသည်။ ထမင်းချိုင့် ထည့်ရဦးမည်..။ အဲဒါတွေ ရှင်းပြတော့ အမေက သူများတွေ ဘယ်လို လုပ်မလဲဟု ဆိုသည်။
“အမေရဲ့ လှလှပပလေး ဝတ်စားပြီး ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း လုပ်ဖို့ ဆိုတာ အိမ်က မိဘက ချမ်းသာတဲ့သူတွေမှ လုပ်နိုင်တာ သိလား” ဟု ကျမက ပြောမိတော့ အမေက ဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးဖွင့်ကာ ကျမကို ဆူပါတော့သည်။
တခါတော့ ကျမ လခကောင်းသော အလုပ်တခု ရခဲ့ပါသည်။ ကျမ၏ ဝါသနာနှင့်လည်း အနည်းငယ် ကိုက်ညီ သယောင်ရှိသောကြောင့် ဝင်လုပ်လိုက်သည်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီအလုပ် စရသည့် အချိန်မှာ ကျမရဲ့ ခင်ပွန်းသည်က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကလေး စဖွင့်ချိန် ဖြစ်နေပါသည်။ အလုပ်လုပ်နေစဉ် တလျှောက်လုံးမှာ တော့ အမေ ပျော်နေသေးသည်။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူ့သမီးအကြောင်း အမြဲကြွားသည်။ တလခွဲလောက် လုပ်ပြီးတော့ ကလေးကလည်းငယ်…။ ကျမ ခင်ပွန်းရဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကလည်း လူဝင်ပြီး မနိုင်မနင်း ဖြစ်လာတာနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပဲ ကောင်းပါတယ် ဆိုပြီး နှစ်လအတိမှာ ကျမ အလုပ်ထွက်လိုက်သည်။ အဲဒီ ကတည်းက အမေ ကျမကို မကျေမနပ် စတင် ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်၏။
“အမေကလည်း သမီးက စာရေးဆရာ ဖြစ်ချင်တာလေ။ လခစား အလုပ်က ဘယ်အချိန် စာသွားရေးမလဲ။ ခုမှ လွတ်လွတ် လပ်လပ် စာရေးနိုင်တာ”
ကျမရဲ့စကားကို အမေ မကျေနပ်နိုင်ပါ။
“ခုဆို အေးအေးအောင်တို့ကို ကြည့်စမ်း။ အိမ်ပိုင်နဲ့ ကားပိုင်နဲ့။ ရွှေရည်တို့ကော… ကားလေးနဲ့ ဟန်းဖုန်းနဲ့။ ကဲ ကြည့်လိုက်တိုင်း ကြော့မော့နေတာပဲ”
“ဟာ အမေက ဘာသိလို့လဲ။ သူတို့က အမွေတွေ ရလို့ ဒီလို နေနိုင်တာ။ အမေ့သမီးကို သူတို့လို ဖြစ်စေချင်ရင် အမေလည်း အမွေ ပေးပေါ့”
အဲဒီလိုများ ကျမက ပြောလိုက်လို့ကတော့ အမေစိတ်ဆိုးပြီ မှတ်တော့။
“အေး.. ပေးချင်တယ်ဟေ့.. ပေးချင်တယ်.. မပေးနိုင်လို့ သိရဲ့လား။ မပြောလိုက်ချင်ဘူး။ အမေက ကောင်းစေချင် လို့ အကြံဥာဏ်ပေးတယ်….. သူတို့က…”
ဆက်လက်ပြီး အမေ့ရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေ ရှည်လျားလာတော့မည် ဆိုလျင် ကျမ အမေ့နားက အသာလစ်ခဲ့ တော့သည်။
အမေ မကျေနပ်ဘူးဆိုလျင်လည်း မကျေနပ်စရာ။ ကျမက AGTI က်ို အီလက်ထရောနစ် ဘာသာရပ်နှင့် ပြီးခဲ့သည်။ တီဗီ၊ အောက်စက် ပြင်တတ်သည်။ ပြင်လည်းပြင်ခဲ့ဖူးသည်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတွေ ကျမဝါသနာ မပါ။ ဆားကစ်တွေ ကြည့်နေရမယ့်အစား စာအုပ်တွေကိုပဲ ဖတ်နေချင်သည်။ သူငယ်ချင်းတွေက ဆက်သွယ်ရေးမှာ၊ မြန်မာ့ အသံမှာ၊ အပြင်ကုမ္ပဏီတွေမှာ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ဖြင့် အောင်မြင်နေချိန်… ကျမက ဘယ်သူ့ကိုမှ ပေးမပြသော စာတွေသာ တကုပ်ကုပ် ရေးနေမိတော့သည်။
အိမ်ထောင်ပြုတော့ကော ဘာထူးလဲ။ အမေ ဘယ်လိုမှ သဘောမကျနိုင်သည့် ကျမထက် ငါးနှစ်ငယ်သော ယောက်ျားကို သူချစ်၊ ကိုယ်ချစ်၊ ကျမနှင့်စိတ်တူ ကိုယ်တူ ဝါသနာ တူတာ တခုတည်း ကြည့်ကာ လက်ထပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ သူ့နောက်က ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးများ (ရှိလည်းမရှိပါ) နှင့် သူ့မိဘ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝန်းများ ဘာမှကို မလေ့လာခဲ့ပါ။
ကျမခင်ပွန်းရဲ့ အဖေမှာ မိန်းမ နှစ်ယောက်ရှိကြောင်းလည်း ယူပြီးမှ သိရခြင်းဖြစ်ပြီး သူတို့၏ ဖအေတူ မအေကွဲ မောင်နှမများ စုစုပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ခုထိ ကျမမသိပါ။ သူကလည်း သိကောင်းသော အရာတခု အနေနှင့် ကျမကို ပြောမပြခဲ့ဘူးပါ။
ကျမခင်ပွန်း၏ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ဝိုင်းကူလုပ်ပေးရင်း ကိုယ့်မြို့ထဲပဲလေဆိုပြီး ဖြစ်သလို ဝတ်၊ စက်ဘီး တစီးနှင့် သွားလာတတ်သော ကျမကို အမေကြည့်မရတာ မဆန်းပါ။ အမေက အပြင်ထွက်လျင် ကြော့နေအောင် ဝတ်သည်။ သနပ်ခါး ဖွေးနေအောင် လူးပြီး နှုတ်ခမ်းနီလေး ပြေပြေဆိုးလို့။ တခါတရံ ကျမကို စိတ်လျှော့လိုက် သော အသံနှင့် ….
“သမီးရယ် သနပ်ခါးကိုတော့ ထူထူလေး လိမ်းစမ်းပါ” ဟု ပြောတတ်သည်။
ကျမကလည်း “ဟာ လိမ်းတာပေါ့ အမေရဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ်တောင် ခံထားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်မှာ လူကျတာနဲ့၊ စားပွဲထိုးတွေကို စီမံရတာနဲ့၊ စားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ရတာနဲ့ ချွေးတွေထွက်ပြီး ပျက်ကုန်တာ” ဟု တုန့်ပြန် ပြောမြဲ…။
အဲဒီအခါမှာ အမေက “အေး ဒါကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်းပဲ၊ ဘာမှ လာညည်းပြမနေနဲ့” တဲ့လေ။ ကျမကဖြင့် မညည်းရဘဲနဲ့။ အမေ့ကို ပြန်လည်ငြင်းခုန် မိတဲ့အခါတိုင်း သားအမိ နှစ်ယောက်သား ရန်ဖြစ်ကြ၊ နောက်ဆုံး အမေကပဲ စိတ်ပျက်လက်လျှော့တဲ့ ပုံစံနဲ့ ….
“ကဲကဲ…. ငါမပြောတော့ဘူး ဟုတ်လား။ နင့်ဟာနင် နေချင်သလိုသာ နေတော့” ဆိုတာနှင့် အဆုံးသတ်ကြသည်။ အမေ ကျမကို ချစ်လို့ အားမရနိုင်တာ ကျမ ကောင်းကောင်းကြီး သိပါသည်။ တခါတလေ ကျမဆီ ပြူးပြူးပျာပျာနှင့် ရောက်လာကာ…
“သမီးတို့ ဆိုင် ခုတလော လူပါးသွားတယ် ပြောတယ်။ ဟုတ်လား …. သမီးရေ …. လူတွေက လက်ညှိုးထိုးချင် နေကြတာ။ မကျစေနဲ့နော်” လို့လည်း ပြောတတ်သေး၏။ ကျမက …
“ဟာ … ဒီလူတွေကို ဂရုစိုက် မနေစမ်းပါနဲ့ အမေရာ … ဘာဖြစ်လဲ၊ ဟုတ်တယ်။ သမီးတို့ဆိုင် ပြုတ်တော့မှာ” ဟု အငေါ်တူးလျင်တော့ ကျမချပေးသည့် လက်ဘက်ရည် ပေါ့ဆိမ့်တခွက်ကို တငုံချင်းသောက်ရင်း …
“သမီးတို့ လက်ဘက်ရည်က ကောင်းပါတယ်။ ဒီမြို့မှာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဘာလို့ ပြုတ်ရမှာလဲ” ဟု အားပေးသလိုလို လေပြည်လေးနှင့် ဆိုချင် ဆိုနေပြန်သေးသည်။
အဲဒီလို အမေနှင့် ကျမလို ခပ်ချာချာ သမီးက ဘယ်တော့မှ တည့်လေ့မရှိဘဲ မတွေ့တာကြာလျင်တော့ လွမ်းတတ်ပြန်သေးသည်။ ကျမက ဘယ်အရာကိုမှ ပိုင်ဆိုင်ချင်လှသည် ဆိုသည့်စိတ် မရှိပေမယ့် ကလောင် တချောင်းကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ချင် လှသည်။ နေ့လယ် နေ့ခင်း ဆိုင်မှာ လူပါးချိန် ရွေးပြီး ကျမစာတွေ ထိုင်ရေး ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ကျမဘာသာ သဘောမကျနိုင်ဘဲ ဆွဲဆုတ် ပစ်တတ်ပြန်သည်။
အမေက ကျမကို..“စာရေးတယ်၊ စာရေးတယ်နဲ့ သမီးရဲ့ ဝတ္ထုတွေ၊ ကဗျာတွေလည်း မဂ္ဂဇင်းတွေထဲပါတာ တခါမှ လည်း မတွေ့ပါလား” ဟု မေးသည့်အခါ ကျမ တော်တော် ရှက်သွားပါသည်။ ကျမ၏ ညံ့ဖျင်းမှုအတွက် အမေ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာ ဘယ်လောက်တောင် အရှက်ရနေပြီလဲ မသိပါ။
တလောက အဘွားဆုံးသည်။ အမေ့ရဲ့ အမေ ကျမရဲ့ အဘွားက အသက် ၉၆ နှစ်တွင် လူကြီးရောဂါဖြင့် ဆုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ အဲဒီတုန်းက အမေ မျက်ရည်တစက်မှ မကျဘဲ ကျမကို ပြောသည်။
“မေမေက သမီးရဲ့ မာမီကြီးအတွက် ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ မေမေ့ကြောင့် မာမီကြီး တခါမှ ဂုဏ်မယူခဲ့ရဘူး။ အခု မေမေ့အသက် ၆၀ နားနီးနေပြီ။ သမီးအတွက် ဂုဏ်ယူချင်လိုက်တာကွယ်”
ကျမကို ဆူတာမဟုတ်ဘဲ အခုလို တလေးတနက်ပြောလာတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ ကျမ၏ နှုတ်ခမ်းများ ဆွံ့အကာ ဝမ်းနည်းမိသလိုလို ခံစားနေရတတ်သည်။ အမေဖြစ်စေချင်သလို ကျမလည်း လုပ်ပေးချင်ပါသည်။ အမေဂုဏ်ယူ ချင်စရာ၊ ဂုဏ်ယူနိုင်စရာ သမီးဖြစ်ချင် ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား …။ အမေ မသေခင် ….။ မသေချာပါ..။
ဒီလိုနဲ့ ကျမရဲ့ သံသယများသာ ကြီးထွားခဲ့ရသည်။
သိပ်ကို တိတ်ဆိတ်တဲ့ညတွေမှာ ကျမ မအိပ်ဘဲ စာရေး၊ စာဖတ် လုပ်လေ့ရှိသည်။ စာဖတ်ရာက ညောင်းညာ လာတဲ့ အခါမှာတော့ အပြစ်ကင်းစွာ အိပ်မောကျနေသော သားလေးဘက် လှည့်ကြည့်မိသည်။ အမေ မသေခင် ကျမက ဘာမှ လုပ်မပြပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ကျမရဲ့ သားလေးကရော။ ကျမ မသေခင် ကျမအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ တခုခု လုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလား။ ဟင့်အင်း ကျမသားလေးက ကျမလို ခပ်ညံ့ညံ့မှ မဟုတ်ဘဲ။ သားလေးကို ကြည့်တာနဲ့ သိသာပါသည်။ သူ ကျမအတွက် တခုခုတော့ လုပ်ကို လုပ်ပြပါလိမ့်မည်။
ကျမလို ကြောင်တောင်တောင်၊ ဟိုမရောက်သည်မရောက်တော့ မဖြစ်စေရ။ သားလေးကြီးလာလျင် ဂစ်တာ သမားပဲ လုပ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ဦးလေးလို တယောထိုးမလား ဒါမှမဟုတ် ပန်းချီဆရာကြီး ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အဆိုတော်လည်း ဖြစ်နိုင်သေးသည်။ တေးရေးသူကော။ ကျမအဖေ သူ့အဖိုးလို ကာတွန်းဆရာများ ဖြစ်မလား။ ဒါမှမဟုတ် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာ ဆရာ …။ သားလေးက ခုမှ တနှစ်ကျော်ကျော် ရှိသေးတာ ကျမမှာ မျှော်လင့် ပိုင်ခွင့်တွေ အများကြီး ရှိနေသည်။
ဒါဆိုရင် အမေကရော…။ ကျမ အဲဒီလို သေးသေးကွေးကွေး အရွယ်လေးမှာ ကျမကိုကြည့်ပြီး အမေ အမျှော် လင့်ကြီး မျှော်လင့်နေခဲ့လိမ့်မည် ထင်သည်။ အမေ ကျမကို ဘာတွေများ မျှော်လင့်ခဲ့မှာပါလိမ့်။ ကျမ သိချင်စိတ် များ ရုန်းကြွလာခဲ့သည်။ အမေ့ကိုတော့ မမေးရဲပါ။
တနေ့နေ့ တချိန်ချိန် ကျမ တခုခု လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့အချိန် ရောက်လာပြီ ဆိုရင်တော့ အမေ့ကို မေးကြည့်ပါမည်။ အဲဒီအခါကျ အမေက ကျမတို့နှင့် အတူရှိပါဦးမလား။ ဒါမှမဟုတ် အဘွားဖြစ်သလို အသိစိတ် ကင်းမဲ့တဲ့ ကလေးလေးတယောက်လို ဖြစ်နေမယ့် အချိန်လား…။ ကျမ ရင်မောသွားသည်။
ခုတော့ ကျမရဲ့ အသက်လည်း သုံးဆယ် ကျော်ခဲ့ပြီ။ အမေ့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ဇဝေဇဝါနဲ့ အရောင် မှိန်ကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့။
သေချာတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ ကျော်လောက်က အမေ့ရင်မှာ ကျမအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ တနင့် တပိုးနှင့် ပြည့်သိပ် လင်းလက် နေခဲ့ဖူးပါလိမ့်မည်….။ ။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီဝတ္ထုရေးတုန်းက ကျမအသက် ၃၀ စွန်းရုံပဲရှိသေးတယ်။ သားကလည်း ၁ နှစ်သာသာ သားဦးလည်း ဖြစ်တော့ မျှော်လင့်တာတွေ ရူးတာတွေက သိပ်များခဲ့ပါတယ်။ ခုချိန်မှာတော့ သားကို ဘာဖြစ်စေချင်တယ် ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ သူဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ အမေလည်း ၆၄ နှစ်တောင် ရှိပြီဆိုတော့ ၃၇ နှစ်အရွယ် ကျမကို လက်လျှော့လိုက်ရောပေါ့။
Thursday, August 28, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို |
This entry was posted on Thursday, August 28, 2008 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီး လိုသမျှ ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေနော်။
ညီမ စာလေးကိုဖတ်ပြီး စေတနာတွေ မေတ္တာတွေ များလွန်းတဲ့ အမေတွေရဲ့ ဘ၀ကို နားလည်ခံစားရပါတယ်။ ညီမရေ.. အခု ညီမလုပ်ချင် ရေးချင်တဲ့ စာရေးခြင်းအလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရနေတာဟာ ဘ၀မှာ အောင်မြင်တာပဲ လို့ ယူဆ နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် ၀ါ သနာ ပါတာ လုပ်ခွင့်ရတဲ့ အခြေအနေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ ဘယ်လောက် အားကျ ဖို့ကောင်းလဲ။ ညီမအမေလဲ ၀မ်းသာ နားလည်လာမှာပါ။ မိဘဆိုတာ ကိုယ့်သားသမီးကို ဘယ်တော့မှ အပြစ်မမြင်တတ်ဘူး ဆိုတာ အမ ယုံကြည်တယ်။